EYONA NDAWO ILUNGE KAKHULU YOKUKHANYA OKUKHANYAYO (ISIKHOKELO SOKUTHENGA) - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa Eyona ndawo ilunge kakhulu yokuKhanya okuKhanyayo (Isikhokelo sokuthenga)
Nazi izinto esizikhethayo eziphezulu zezona ndlu zikhanyayo ziphantsi ezilula ukuzinyamekela.
Xa uhamba kwicandelo lokufaka indlu kwivenkile yakho yendawo, usenokucinga ukuba awunako ukukhanya okwaneleyo kwendalo ukuxhasa isityalo esiphilayo. Musa ukuphelelwa lithemba, zininzi izinto zokutyala ezindlini ezikhula kakuhle kwiimeko zokukhanya eziphantsi.
Izindlu zendlu aziyondlela nje intsha yokuhlaziya nokucoca umoya ekhayeni lakho, zikwabonelela ngomdla obonakalayo kunye nokuthungwa. Kwaye izityalo zendlu zilungele ukuzalisa ezo mbombo zingenanto ezingenanto kunye neendawo ezimnandi ongazi kakuhle ukuba ungazenza njani.
Yongeza izinto zendlu ekhayeni lakho, ziya kuqaqambisa usuku lwakho kwaye zonyuse uyilo lwakho. Ukufumana ezinye izimvo ndwendwela iphepha lethu malunga Imithi efanelekileyo yangaphakathi Apha.
Nazi ezinye zezona zindlu zincinci zikhanyayo:
Isitya se Iron Iron
Izityalo zenyoka lolunye lwezona zithandwa kakhulu kwizityalo, kwaye ngesizathu esihle. Izityalo zenyoka kulula ukuzikhathalela, azidingi kukhanya kuninzi, azidingi manzi maninzi, kwaye azinangxaki yokungena kwezinambuzane.
Bafake kwindawo efumana ilanga elingathanga ngqo kwaye ubankcenkceshele kube kanye kwaye ulungile ukuba uhambe. Qiniseka ukuba ubabhaka ngomhlaba okhululekileyo ukuze iingcambu zingaboli kwaye ungazinkcenkcesheli rhoqo.
Ukongeza, izityalo zeenyoka ziyamangalisa ukujonga. Zinamagqabi amade, amade, ahlukeneyo aluhlaza. Ezinye iindidi zinamagqabi angqamene nomthubi okanye mhlophe, amanye abomvu abotshwe, kwaye amanye abonisa amagqabi amahle agqweshiweyo. Isityalo esifanelekileyo sokungakhathali kwegadi yangaphakathi, ukujonga okumangalisayo kwaye akukhathali ukuba womiswe kancinci kube kanye!
(Thenga isityalo seNyoka e IAmazon )
Iifeni lolunye ukhetho olufanelekileyo kwizityalo zangaphakathi, ngakumbi kwigumbi lokuhlambela apho banokufumana khona ukufuma okuyimfuneko. Nangona banokukhanya okuphantsi, bayayifuna imva kwemini okanye intsasa ekukhanyeni kwelanga, ke pop phambi kwefestile eya kufumana ukubonwa kancinci yonke imihla.
Iiferns azithandi ilanga elinamandla, nelishushu nangona kunjalo, ke sukubavumela ukuba bahlale phambi kwefestile efumana ukubonakaliswa kwemini yonke, ngakumbi ehlotyeni!
Iiferns zikunika uhlaza, uhlaza olupheleleyo olubolekisa imeko yeenkuni kwindawo yakho. Bonwabile, kulula ukukhathalela isityalo esiza kongeza ubukhazikhazi bokubonakalayo naphi na apho ukhethe ukubabonisa khona. Eminye yeeferns ezibalaseleyo ezindlwini yiMaidenhair fern (Adiantum), iBoston fern (Nephrolepis exaltata), iSilver Brake (Pteris cretica), indlwane yeNtaka (Asplenium nidus), Kangaroo paw (Microsorum diversifolium) kunye neQhosha leqhosha (Pellaea rotundifolia)
(Thenga i-Maidenhair fern kwi IAmazon )
Iifilodendron zizityalo zangaphakathi zeklasikhi kwaye kuye kwafuneka ukuba zibe negadi engaphakathi endlwini amashumi eminyaka, ukuba ayide ibe khona. Intliziyo yazo entle, amagqabi amilisiweyo kunye nemidiliya emilenze yenza iparadesi eluhlaza naphina apho ityalwe khona. Xa zibekwe kufutshane nefestile kodwa zikhuselekile ekukhanyeni kwelanga ngokuthe ngqo, ziyachuma kwaye ziyakhula ngaphandle kokusilela. Bafuna ukunkcenkceshelwa rhoqo, kodwa mayiyeke i-intshi ephezulu okanye umhlaba womile phakathi kweentsuku zokunkcenkceshela ukuze ungafumani manzi.
Ungathatha ukusikwa kwiiPhilodendrons kwaye uqalise izityalo ezitsha kwiivazi ezikhulayo okanye nakwiglasi yamanzi. Iifilodendron zihlala zididekile kunye nePothos, njengoko zinamagqabi ajongeka ngokufanayo. Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba unesityalo esifanelekileyo njengoko iPothos inetyhefu kwaye ingazenzakalisa izilwanyana zasekhaya kunye nabantwana abancinci.
(Thenga esi sityalo sePhilodendron e IAmazon )
I-Anthurium, kunye namagqabi ayo abanzi, anzulu aluhlaza kunye neebhlowu ezibomvu, ezipinki, okanye ezimhlophe zijongeka njengokulondolozwa okuphezulu okungaqhelekanga! Ngokwenyani, esi sityalo kulula ukuba sikhathalelwe kufuneka kwikhaya eliyilwe kakuhle. Kwiimeko zokukhanya okuphantsi kakhulu, ezi zityalo ziya kukhula kancinci kwaye zityatyambe kancinci kodwa aziyi kufa.
Eyona meko ilungileyo kubo kukukhanya okungangqalanga, kufutshane nefestile, kodwa hayi phambi kwayo. Yinkcenkceshele xa umhlaba womile uchukumise ukuze uhlale wonwabile kwaye kancinci uchumise amaxesha ambalwa ngonyaka kwisityalo esonwabileyo. Beka embizeni oyibambe kuhambo oluya eSpain okanye kwimbiza engenanto oyifaka kwibhasikithi enkulu ukuze ujonge kuyo. (Thenga isityalo se-Anthurium IAmazon )
Ndingonwaba ukuba ndingamhoya umhlobo wethu wakudala, uLucky Bamboo. Bathanda ukukhanya okungangqalanga kwaye kulula ukuba babanyamekele. Njengayo yonke i-bamboo, aba ngabalimi abakhawulezayo kwaye ungabathengela kwakhona ukuba baya kuba bade kakhulu kwindawo yethu. I-Lucky Bamboo inokuthengwa ibrukiwe, emanzini okanye ematyeni, ijijekile, kwaye iphothiwe njengodonga oluncinci lwe-bamboo Zongeza ubume kunye nomdla kwaye zincinci ngokwaneleyo ukuba zinokusetyenziswa njengesityalo setafile okanye nokuba zibekwe eshalofini.
Inkathalo ilula, gcina nje iingcambu kumanzi acocekileyo, acocekileyo kunye neziqu kunye namagqabi ngaphezulu kwamanzi. Ukuba ukhulisa amanzi kuphela, tshintsha rhoqo emva kweeveki ezimbalwa ukuthintela ukubola kwengcambu. I-Lucky Bamboo ihlala inikwa njengesipho sokufudumeza indlu kodwa oko akuthethi ukuba ngekhe uthenge ezimbalwa ukuzisa ithamsanqa ekhayeni lakho! (Thenga isityalo se-Lucky Bamboo kwi IAmazon )
Iinyibiba zoxolo, ezaziwa kwezinye izangqa njengezityalo zekhabethe ngenxa yokunyamezelana kokukhanya okuphantsi, lukhetho oluhle lokutsala indlu. Ngamagqabi abanzi, amenyezelayo, amnyama aluhlaza kunye neentyatyambo ezimhlophe ezimhlophe, zintle kwaye zodidi kwaye ngokwenene zizisa imeko yoxolo kwindawo yakho.
Gcina uthuli lususwe ngokusula amagqabi amatyeli aliqela ngonyaka kwaye uwagalele kuphela xa umhlaba womile. Iinyibiba kwiimeko zokukhanya eziphantsi kakhulu aziyi kutyatyamba kakhulu, zivumele ukuba amagqabi ezityalo akhanye ngokwenene. Ezi nzwakazi ziyithumela inqwelomoya eyamkelekileyo xa ibekwe kwitafile esecaleni kwigumbi leendwendwe. (Thenga esi sityalo seLily Lily kwi IAmazon )
Iingoma zokungena kwitheko lomtshato
Esinye isityalo esincinci sokukhanya esincinci yiCast Iron Plant. Kulula ukuyinyamekela kwaye iyaziqinisekisa ngokubonakalayo, ngamagqabi amnyama, amnyama. Kuluhlu olungasemva olukhulu lokudala umhlaba, umhlaba oziva usemajukujukwini.
Isityalo seCast Iron ngumlimi ocothayo, ongachaphazeleka sisifo okanye izinambuzane, kwaye akanangxaki ngokunkcenkceshela okanye ukukhanya. Ukuphakama okupheleleyo kumalunga neenyawo ezimbini xa sele ikhule ngokupheleleyo kwaye kujongeka kukuhle ngokuchasene nemifuno eyahlukeneyo yesityalo senyoka xa ibekwe kulungelelwaniso lwezityalo ezininzi.
(Thenga isityalo seCast Iron kwi IAmazon )
Ezi zezona zimbalwa zezona ndlwana zaziwayo zokukhanya ziphantsi ezikhoyo. Ngamnye uboleka into eyahlukileyo eyahlukileyo, nokuba inde, amagqabi amade, iintyatyambo ezintle, okanye imicu evundileyo, izitya zendlu ziyilo elungileyo. Nokuba uhlala eflethini enefestile enye iyodwa, ungonwabela umoya ococekileyo, ococekileyo kunye nobuhle bendalo obubonelelwa sisityalo.
Iiflethi zomtshato neembadada zomtshato
ilokhwe eluhlaza neyesilivere yomtshato
abadala kuphela amagama isimemo lomtshato
Iindawo ezilungileyo zokutshata emhlabeni